I-China Iteyipu kagesi, itheyiphu yokushisa omlilo, i-PVC tape, ifektri yokufaka ye-insulation kanye nabenzi Boda
Isigaba se-Hole Saw
Drill Amabhithi Futhi Isisidi Isigaba
Isigaba sokusika i-Blade & Grinding Wheel
Isigaba Samathuluzi Esandla
Amatebhe Amathuluzi Wokusetha Amathuluzi, isethi yesokhethi, isethi yamathuluzi, isethwe ngamathuluzi e-DIY
Izipikili, Izikulufu, Ama-Fasterners, Inayiloni Izibopho Njengesigaba
Insimbi ephephile, engashisi umlilo, ikhodi yokukhiya iminwe, zonke izinhlobo zokuphepha
I-Angle grinder, umthelela wokuprinta, isando, i-ion drill, amathuluzi kagesi
Iteyipu kagesi, itheyiphu yokushisa omlilo, ithephu ye-PVC, itheyipu yokuhlukanisa
Umshini wokushisela, umshini wokushisela we-DC, umshini wokushisela we-AC, imaski yokushisela, izinsimbi zokushisela
Indwangu ye-PVC yemvula, indwangu yobufakazi bemvula ye-PE, ikhava yeloli
Ingidi, ingidi yethusi elingisa, insimbi engagqwali, ilokhi yamaqabunga, ilokhi yokulwa nokweba, ukukhiya kwephasiwedi, ukukhiya izigxivizo zeminwe namanye amadlambi
Chain, ephakamisa uchungechunge, lashukumisa chain, insimbi engagqwali uchungechunge, Ukucaciswa ahlukahlukene
Isibhamu seglue esishisayo, isibhamu seglue yensimbi kagesi, isibhamu somoya oshisayo, isibhamu seplastiki, insimbi yokuthwebula
Jack, jack ovundlile, jack mpo, jack wokubacindezela
Izibopho zenayiloni, izibopho, ukukhuthazela okuphezulu, i-prot ...
Isethi yethuluzi lasekhaya, ukuhlangana kwamathuluzi, ikhithi yokulungisa izimoto, i-DIY ...
Isikulufa senhloso emibili, i-ratchet dual-purpose wrench, mo ...
Diamond ukusika blade, idayimane isaha blade, tile Ceramic ...
Isando sikagesi, isisel kagesi esalungiswa ngogesi, i-SDS, iMax, He ...
Twist sokuprakthiza, engagqwali sokuprakthiza kancane, steel sokuprakthiza ...
Isando sokuprakthiza i-hammer kagesi, i-drill kancane, i-SDS, ...
Ukwakhiwa sokuprakthiza kancane, multi-functional ingxubevange sokuprakthiza ...
I-TCT hole saw, umgodi wokumba, insimbi yensimbi yensimbi, usimende ...
I-HSS hole saw, iron hole saw, iron hole saw, qu ephezulu ...
Diamond ingilazi isaha Ceramic, ingilazi sokuprakthiza, ingilazi holw isaha ...
42 Bi-Metal Hole isaha ngensimbi yokhuni, Saw kanjani, iGypsum ...
Iteyipu kagesi, noma Iteyipu yokunamathisela kagesi ye-PVC, eyaziwa nangokuthi itheyiphu yokunamathisela kagesi noma iteyipu yokufaka. Ingafushaniswa njenge: I-PVC tape kagesi, itheyiphu ye-PVC njalonjalo. Iteyipu kagesi inokufakwa okuhle, ukumelana nelangabi, ukumelana namandla kagesi, ukumelana okubandayo nezinye izici. Ngokuvamile ilungele ukuthanjiswa kocingo, ukwahlukanisa nokulungiswa kwezinhlobonhlobo zezimoto nezingxenye zikagesi ezifana ne-transformer, motor, capacitor, voltage regulator, njll. Iteyipu kagesi inebomvu, ophuzi, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okumhlophe, okuluhlaza okotshani, okumnyama, okusobala nokunye imibala. Yini i-tape kagesi futhi yini ukusetshenziswa kwayo?
Inqubo yokukhiqizwa kwetape kagesi:
Kususelwa kakhulu kwifilimu le-PVC bese kuthi kufakwa ingcina enozwela yenjoloba.
Inhloso yetape kagesi:
Ngokuvamile kufanelekile ukwahlukanisa izingxenye ezahlukahlukene zokumelana. Isibonelo, i-wire joint winding, ukukhanda ukulimala kokulungiswa, i-transformer, i-motor, i-capacitor, i-voltage regulator nezinye izinhlobo zemoto, izingxenye ze-elekthronikhi zendima yokuvikela ukwahlukanisa. Ngasikhathi sinye, ingasetshenziselwa ukubopha, ukulungisa, ukukhotha, ukulungisa, ukubeka uphawu nokuvikela kwinqubo yezimboni.
Izici zeteyipu kagesi:
Iteyipu kagesi isho iteyipu esetshenziswa ngogesi ukuvikela ukuvuza nokufakwa kwezingcwecwe. It has ukusebenza okuhle ukwahlukanisa, ilangabi cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi, high voltage ukumelana, high lokushisa ukumelana, ukuncipha eqinile kuyaqina, kulula ukudabula, kulula ukugoqa, high ilangabi retardancy, omuhle sezulu ukumelana nokunye. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwetape kagesi nakho kubanzi kakhulu. Ingasetshenziselwa ukwahlukanisa izintambo zensimbi nezintambo ezingaphansi kwama-70 ° C, ukukhonjwa kombala, ukuvikelwa komgogodla, ukubopha izintambo zokubopha, njll., Futhi kungasetshenziselwa ukubopha, ukulungisa, ukugoqa, ukulungisa, ukubeka uphawu nokuvikela kwinqubo yezimboni.
Ukusetshenziswa nokugcinwa kwethephu kagesi:
Lapho sisebenzisa iteyipu kagesi, kufanele siyisonge ngokugqagqana phakathi. Lokhu kwenzelwa ukwenza umfaniswano wokugwedla futhi ucoceke, futhi kufanele kusetshenziswe ukungezwani okwanele. Ngaphezu kwalokho, ohlotsheni lokuxhuma olufanayo, iteyipu kagesi kufanele isongwe ekugcineni kocingo, bese isongwe emuva ukushiya iphedi yenjoloba, ukuvimbela ukusikeka. Lapho ugoqa ungqimba lokugcina lweteyipu kagesi, akufanele yelulwe ukugwema ukudonsa ifulegi. Ukuze kugcinwe ukusebenza kwayo kuzinzile, ithephu kagesi kufanele igcinwe ekamelweni lokushisa nasezimeni zomoya.
Iteyipu kagesi yaseBOSENDA, eyenziwe ngezinto ezisezingeni lokuqala, inokunamathela okuhle kanye nesiqinisekiso sesisindo. Ihlukile kumateyipu kagesi emakethe ajwayelekile, i-viscosity enganele, futhi impendulo ngemuva kokusetshenziswa ngokuvamile ayisihle. Iteyipu yethu ihlolwe ngokuqinile, kusukela ekukhethweni kwezinto zokusetshenziswa, ukukhiqizwa kwesixhumanisi ngasinye, kulawulwa ngokuqinile. Qiniseka ukuthi ikhasimende liyaneliseka ngemuva kokuthola. Amakhasimende avela eMiddle Est, eMpumalanga Yurophu, eNingizimu Melika kanye namazwe e-EU.
Langaphambilini I-Angle grinder, umthelela wokuprinta, isando, i-ion drill, amathuluzi kagesi
Olandelayo: Umshini wokushisela, umshini wokushisela we-DC, umshini wokushisela we-AC, imaski yokushisela, izinsimbi zokushisela
Itheyiphu ye-PVC kagesi
Bhalisela i-newsletter yethu ukuhlala usesikhathini namaphromoshini wethu, izaphulelo, ukuthengisa nokunikezwa okukhethekile
Ikheli: Isitezi sesithathu, No. 300, North Chouzhou Rd., Idolobha lase-Yiwu, esifundazweni saseZhejiang, eChina
UMsombuluko-ngoMgqibelo, 9 AM-10PM